သေးငယ်တဲ့ပြသနာများအတွက်ကြီးမားသောပြ--နာ - Kalimba - Kalimba ဖိုရမ်နှင့် ပတ်သက်၍“ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” မေးခွန်းထုတ်သည်
ငါမကြာသေးမီက april yang dual kalimba ကိုရရှိခဲ့ပြီးအပေါ်ဆုံးသော့ ၄ ခုသည်အလွန်တောင့်တင်းသောကြောင့်လုံးလုံးပဲ့တင်ထပ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါကွေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုလျှော့ပေးရေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပေမယ့်ကူညီပေးနေခံရဖို့မထင်ထားဘူး။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ?
|2ရေးသားချက်များ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမြင့်ဆုံးသော့လေးခုကတစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့က "ဆူညံသံ" များကဲ့သို့မြည်နေသော်လည်း၊ ၎င်းကို ပိုမို၍ ခက်ခက်ခဲခဲဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့် tines များကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် haha ​​ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်လို့မရအောင်ညှိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
Cherri Kalimba အားဖွငျ့ဖွစျသညျ 23/04/2021 2:40 am
Ive က၎င်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာအနေဖြင့် Tines များကိုကွေးခြင်း / ကွေးခြင်းတို့ကိုကြိုးစားသည်
Macready အားဖြင့် ခေါင်းစဉ် starter 01/05/2021 3:07 pm
ဘီးများ ဆွတ်ခူး ကူညီပါ
ဗွီဒီယိုကြည့်ပါ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ "စျေးပေါသော Kalimbas" ကိုမကူညီနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည် Kalimbas အားလုံးနှင့်အတူရှိနေသည်။
ငါပြားကိုထုတ်ယူ။ သူတို့ကိုကျဉ်းစေရန်သူတို့ကိုသဲ, ဒါကြောင့်အချို့သောတိုးတက်မှုဆောင်ခဲ့လေ၏။
ငါ HOKEMA (သို့) BOLF မှ Kalimbas များရရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြည်လင်သန့်ရှင်းပြီးအသံအနိမ့်အမြင့်များရှိခဲ့ပြီ။
| 34 ရေးသားချက်များ
ခေါင်းစဉ်များ Tags: သံမဏိ (၁), ဆွတ် (၁), အကူအညီ (1),
နောက်ဆုံးရပို့စ်: Poll - Flat board သို့မဟုတ် Resonance box လား။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်: keishawhitlow၅ Recent Posts မဖတ်ရသေးသောရေးသားချက်များ Tags: